Siilaanyo Maxuu Isaga Reebay Isku Shaandhayntiisi | Salaan Media
Siilaanyo Maxuu Isaga Reebay Isku Shaandhayntiisi
Wiigan aynu ku jirno Siilaanyo waxa uu inagaga yaabiyay isku shaandhayntii golaha wasiiradiisa , Tan oo ahayd tii labaad mise sadexaad intii dawladan hada talada haysaa jirtay oo ah sadex sano, sida soo if baxdayna inaga oo qudha inagama ay yaabin habkii loo xulay se waxay xataa ka yaabisay kuwii xilka ka hayay dawlada sida loo kala xushay.
Isku shaandhayni sideedaba ma aha wax aan la filan , waa mid uu fisho qofkasta oo xil qabtaa gaar ahaan marka ay ka imayso madaxwayne weli is moodaya inuu sal dhiganaayo ,hawl iyo shaqana u taal. Se tani waxay muujisay sida siilaanyo isagu kalsoonayn awood uu u madax baanan yahyna u lahayn in uu ku sameeyo shaandhayn dhab ah waxana muuqda talooyin iyo tusaalayn badan oo u haboonaan lahaa in aanay gaadhin xafiiskiisa.
Xaqiiq waxaa ah isku shaandhayn dhab ah oo la helaa in aanay habeen iyo laba wax ku badasheen se waxay ibo fur u noqon lahayd in la filo waxii dadku ku doorteen iyo waxii ay filayeen in dalku helo cadaalad awood qaybsi deegaan ilaa heer qabiil taas oo saamaxaysa in la helo qorshe baahsan (holistic approach) oo wax lagaga qabto caqabadaha horyaal. Se waxaa iska muuqda heer siyaasad iyo maamulba in golahani aanu wax baro dheeri ah dheeraanayn kuwaa ay badaleen.
Madaxwaynahani wax uu igu muuqadaa tababare, hadana isaga oo ciyaartooy wacan haysta laga badinayo mar kasta, intaana eedaynaya ciyaartooyda isaga oo hadana isku bad badalaya ciyaar kasta , marnaba aan isu arkin in dhibtaadu isaga tahay, se waxa uu eegayaa tahay hareeraha iyo inta kale ee kooxda ciyaartooyada ah. Madaxwaynahii hore ee Maraykanka Harry Truman ayaa waxaa la sheegaa in astaan hal hays u ahi miiskiisa hor saar naan jirtay taas oo hal kudhiga ku qornaa ahaa , “The buck stops here.” Marka af soomali ahaan loo fasiro u dhigmaysa “Arin oo dhan halkan buu ku soo joogsadaa ” Waxa uu ahaa madaxwayne muujinyaa in uu hogaamiyo, masuuliyadeedana leeyahay.
Waxaa muhim ah in loo banbaxo in lala xisaabtamo cida xil ka haysa een laga aamusin, inagaa awooda iyo xilka u dhiibna kana aamusna, Waxaa ayaan darano qaranka ku ah in axsaabtii mucaaradka iyo barlamaan/guurti dheeliyi lahaa awooda dawladu maanta hunguri ka door bideen oo manta halku dhigoodu noqtay mucaaradad waxaba ku cuni maysid ! . Mee haanankeenii dumuquraadi , dastuur iyo hogaan kala xadaysan ?
Waxaad moodaa in la gaadhay xiligii Siilanyo si qoto dheer hoos isagu eegi lahaa naftiisa suaalna iska waydiin lahaa in uu yahay ninkii ku saxnaa shaqadaa .Ceeb maaha inuu isagu isku arki karo kaa se waxa u haboon in inuu hal bayd ka soo tixraaco buugii Mandela oo ahaa nin isku kalsoon fahansanaa in ay jiraan dad badan oo shaqdan madaxwaynenimo kaga haboon taas oo ah tii uu ku goaansaday inuu door qudha xilka joogo ,isaga oo marna aan isu aqoonsan madaxwayne una baahan in la yidhaahdo .
Halka Siilanyana dabo meermeeris ka yahay balantii hore u qaaday xiligi tartanka lagu jiray oo ahayd in aanu hal door dhaafin taas oo ah mid uu manta dafirsan yahay se waxa qaranka u haboon inuu baydhkaa Mandela soo maan guursho sidana inaga socdo se waxaa ayaandaro ah in dadka kuwooda daciifka ahi u jilicsan yihiin awooda iyo xilka .
Waxa ugu wayn ee ka soo ifbaxaday Isku shaandhayntisii dadkuna iska waydiineeyaan waxay noqotay maxuu isaga reebay isku shaandhaynta!
Faarax Colow Maxamed